Nzira Yokuita Nemazuva Ekupedzisira Catfish Zvokudya / Zvokudya 2019 • Yurie BSF
Yurie | 7 Sea, 2019 | Nzira yePearl Catfish | 1 Comment
Chii chinonzi Catfish?
Catfish inomirira hove yemvura yakachena ine muviri wakareruka, yakadzika, uye inotsvedza nokuti pane rudzi rwemucheka mumuviri. Ihove iyi inewo masharuki mumuromo wayo. Catfish inobva pashoko rechiGiriki rokuti chlaros, zvinoreva kuti 'kusakara' kana kuti 'simba', izvi zvinoreva kukwanisa kwehove kupona mukati kana kunze kwemvura. Catfish kana mune mimwe mitauro inonzi Clarias kana catfish ndeye rudzi rwehove yakachena inogara mumativi ose enyika. Catfish inonzwisisika nyore nekuda kwemuviri wavo unotsvedza, yakareba masharuse anotanga kubva pamuromo wake, uye muviri wake wakareba, wakadzika. Izvi zvinotevera zvichakurukurwa pamusoro pemakungwa uye maitiro ekugadzira hove, muchiitiko chino kuita catfish kudya, maitiro maviri ekuita kuti hove dzinochengetedzeka kubva kune bran, nzira yekuvirisa uye yekuti catfish feed.
Catfish inowanzogoverwa mumhando dzakasiyana-siyana dzemarudzi. Saka usashamiswa kuti catfish muIndonesia ine mazita mazhinji, pakati pevamwe: munzvimbo yeWest Sumatra inonzi hove fish, mumugwagwa weGayo uye muAceh inharaunda inonzi hove yakafa, muhova yeKaro inonzi fish kuShitakut, muSouth Kalimantan inonzi pintet hove, mu Makassar anonzi hove ye rivet, muSouthwesi yeSulawesi inonzi ikan cepi, iri muJava iyo inonzi catfish kana leachate kana sangkuriang, kana hove yehove munzvimbo yeEast Kalimantan.
Sezvo kune dzimwe nyika nyika ino inonzi catfish inonzi zita rehove (Africa), muThailand inonzi plamond, Sri rare inonzi magura gura. Catfish muChirungu inonzi kutamba makungwa, siluroid, catfish, kana mudfish.
Mhando dzeClarias dzinonzwisisika nyore nyore nekunyorova kwayo, kupisa, kwenguva yakareba uye zvishoma zvakanyatsogadziriswa muviri, izvo zvakagadzirisa zvipembenene uye zvinoputika. Dzimwe nguva zvipembenene uye zvipembenene zvakadzoka zvinosungirirwa kumucheto wechikara, izvo zvinokonzera catfish kutarisa pameso sekuona.
Chimiro kana musoro wekugadzirisa catfish zvakaoma kudzokorora, ine maziso mashoma uye maitiro omuromo wayo akareba, saka ane zvigadziko zvina zvezvibhakera kana tine ruzivo nemafuta, ayo anobatsira kuenderera munzvimbo ine rima yemvura. Catfish iinewo kuchinja kwechimiro chezvemapfurikisi anowanikwa mune dzakasiyana-siyana zvegill arcs. Kuva nechikwata chepurasitiki pamucheto wemativi ose maviri akaumbwa semakona akaoma mapfupa pamakona emakumbo ake. Vanhu vazhinji vanopikisa kuti kana ichi chiremba ichirova muviri wemunhu ipapo munhu wacho acharatidzwa nefivha yakakwirira nokuti munzwa hauna kupinza chete asi unofanirwawo kuti une chepfu.
Catfish haichazombowanikwi mumvura yeharuki kana mvura yemunyu, kunze kwekuti catfish ichingwa segungwa catfish yemarudzi akasiyana-siyana kana mhuri. Catfish inowanzogara mumvura yakachena isina mvura yakadai sedzivo mumvura dzine mvura dzakadzikama, dziva, dziva, madhamu kana matongo, mumvura yakasvibira yemupunga, kana muropa remvura yakasvibiswa, somuenzaniso mumasara uye kushambidza kwemvura kunoshandiswa kwemarara.
Catfish inobata hove, iyo inonyanya kushingaira mukutsvaka zvokudya kana usiku hunouya. Pakati pezuva catfish inowanzove yakanyarara uye inodzivirira pasi pematombo makuru akakomba uye munzvimbo dzine chiedza chakasimba kana nzvimbo dzine rima.
Kana iri musango, catfish inowanzoisa mazai kana kuputira mumwaka wemvura, nokuti nguva yemvura inguva ine nguva yakawanda yemvura yakasimba. Kunyange zvazvo kazhinji catfish vana vaduku kudarika karafu yakawanda, panewo mamwe marudzi efishfish anogona kusvika ku 1-4 m kure uye anogona kuyera kupfuura 130 kg, somuenzaniso catfish kubva kuEurope.
Mukuwedzera kune kurarama musango, panewo marudzi akawanda echechi inogona kudyiwa uye inofarira nharaunda nekuda kwekuravira uye kuumbwa kwemhuka inonaka. Mhando dzakawanda dzekatfish dzakave dzichirimwa nevanhu, kunze kwekuti mhando dzakawanda dzinotorwa uye dzinovhimwa kubva kune dzinowanikwa munharaunda, izvo zvinoguma kune mamwe marudzi efishfish anotyisidzirwa kuparadzwa. Kana iri rudzi rweAfrica catfish, iro rinozivikanwa pakati pevanhu sezvipfuwo zvehove, inenge iri rudzi rwehove dzinotengeswa zvakananga kubva kuAfrica yeAfrica.
Nokuti zvekudya catfish feed zvinogona kunge zviri muchimiro larva maggot kana mamwe mhando yemhuka shoma dzakadai seplankton kana zvimwe zviduku zviduku zvakakosha zvekatefish. Paunodzokera kumucheto wehutano hwehutano, hutachiona hunotarisira kuumba hutachiona hwakanaka hwekudya kwechikafu.
kunze kwezvokudya zvechisikigo, catfish inofanira kupiwa mamwe mapfupa nokuti zvimwe zvekudya zvinotarisirwa kukurumidza kuita shato yekukura. Tinogona kuwana zviri nyore izvi zvinyorwa zvisingabatsiri kutsvaga kana kutenga, nokuti zvimwe zvekudya zvinogona kuva semhando yezvipfuwo zviduku, maronda ematumbo akadai senyama yemukumbo, mashizha, mashizha mashizha, kana mapaita kana mapepa ane mapuroteni akawanda uye akanaka catfish growth.
Nekudya zvakavhenganiswa kana kwechigadzirwa, kiata inogona kuwanikwa pamhuka kana zvirimwa zvekurima. Ichi chimiro chekudya chakavhenganiswa kazhinji chinowanzoita sebhuta, pellets, pasta nezvimwe zvakadaro. Iwe unogona kushandisa zvakare maitiro ekugadzira kubva kumagogane kana maggot. Ichi chikafu chekugadzirira chinogona kushandiswa sezvokudya zvechisikigo nekuda kwezvakanaka zvayo zvekudya kwekambani yekukura.
Nzira yekuita catfish kudya kubva kumatare
Zvishandiso Nezvinhu Zvakagadzirwa:
5 tbsp mafuta ezviyo
Mvura yakachena 5 liter
Isai zvose zvinoshandiswa kunze kwemafuta emidziyo mumudziyo, simbisai kusvikira musina kunaka
Wedzera mvura zvishoma nezvishoma
Isa mukapu, moto kune maawa 1
Mushure mokunge uchisa, funganisa mafuta emafuta
Nyora zvakare kusvikira wakabatana
Regai kusimudzira 1 usiku kuti tidzire mhepo
Dhidziro kumativi ose
Zvokudya zvakagadzirira kupa
Nzira yekugadzira catfish kudya
Kune mhando dzakawanda dzekasika yekudya dzinogona kuitwa nekuviriswa. Izvozvo zvinotevera catfish feed inogadzirwa kubva kukakhuconutp fermentation. Koconut pulp inosarudzwa nokuti zviri nyore kuwana. Zvishandiso nezvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa zvinotevera:
Bhakete / ngoma / mapuranga
Kokonta papepi 25 kg
Hemhemade EM4 2 ndiro sarudzo / kana iwe ukatenga, shandisa EM4 yezvokudya
Yeast 5-7 zviyo / 2-3 mbiriso
Mineral feed supplement for 0,5 kg hove
Fukidza kona kokonti kuitira kuti irege kusunungura mamwe mvura, kusvikira yaoma zvachose
Steam mumvura inopisa kwehafu yeawa
Simudza uye dhonza
Gadzirai em4 sarudzo, mbiriso uye mineral feed newaini yakakonzerwa nekakhuni, fonganisa zvakanaka
Mushure meizvi, pindai mumutambo, vhurai musangano uye mupe chinangwa chechivigiro
Regai kumira kwemazuva 3-5 kusvikira kuvirisa kwapera.
Isa mupurasitiki yakadzika kuitira kuti zvokudya zvigare kwenguva refu
Kana iwe uchida kuti zvokudya zvigare kwenguva yakareba, iwe unogona kugovera huni yakabikwa, zvokudya zvave zviri muchoto zvinogona kupera kwemwedzi yakawanda ye2.
Nzira yekuita organic catfish feed
Zvishandiso uye Zvishandiso:
100kg manyowa emombe
Iyo EM4 sarudzo ndeye 1 liter fisheries
Mvura yakachena 20 liter
Shuga cane / molasses 2 liter
Jigen / mvura tangi simba 10-30 liter
Manyowa akaomeswa kutanga nokuoma
Sakanidza zvose zvinoshandiswa zvinokurudzira kusvika zvakasanganiswa
Zvisungo izvo zvave zvichinyatsopindira mumvura / jirigen compan
Dhavhara zvakasimba makombiyuta emvura
Kupera kwemavhiki e1-2
Zvose zvino uye zvozarura chifukidzo kuitira kuti mweya ubude
Yurie musi waMarch 7, 2019 pa 4: 16 pm